သက်ဆိုင်ရာ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် လူသတ်မှု ၁၀ မှု၊ မုဒိမ်းမှု
၁၄ မှု၊ ခိုးမှု ၁၀၅ မှု၊ နာကျင်စေမှု ၂၀၃ မှု၊ ယာဉ်တိုက်မှု ၂၈၅ မှု၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်
လူသတ်မှု ၇ မှု၊ မုဒိမ်းမှု ၄ မှု၊ခိုးမှု ၆၂ မှု၊ နာကျင်စေမှု ၄၀ မှု၊ ယာဉ်တိုက်မှု ၁၇၅ မှု၊ ဧရာဝတီ
တိုင်းဒေသကြီးတွင် လူသတ်မှု ၁၂ မှု၊ မုဒိမ်းမှု ၂၀ မှု၊ ခိုးမှု ၃၆ မှု၊ နာကျင်စေမှု ၇၇ မှု၊ ယာဉ်တိုက်မှု
၁၁၂ မှု၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် လူသတ်မှု ၁၆ မှု၊ မုဒိမ်းမှု ငါး မှု၊ ခိုးမှု ၂၈ မှု၊နာကျင်စေမှု ၅၃ မှု၊
ယာဉ်တိုက်မှု ၁၃၆ မှု၊ စစ်ကိုင်းဒေသကြီး တွင် လူသတ်မှု ကိုး မှု၊ မုဒိမ်းမှု ၈ မှု၊ ခိုးမှု ၂၅ မှု၊ နာကျင်
စေမှု ၂၄ မှု၊ ယာဉ်တိုက်မှု ၁၂၄ မှု၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တွင် လူသတ်မှု တစ်မှု ၊ ခိုးမှု သုံးမှု၊
နာကျင်စေမှု ရှစ်မှု၊ ယာဉ်တိုက်မှု ၃၉ မှု၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် လူသတ်မှု ၁၁ မှု၊ မုဒိမ်းမှု သုံး
မှု၊ ခိုးမှု ၂၀ မှု၊ နာကျင်စေမှု ၂၆ မှု၊ ယာဉ်တိုက်မှု ၇၅ မှု၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် လူသတ်မှု ခုနှစ်မှု ၊
မုဒိမ်းမှု နှစ်မှု၊ခိုးမှု ၁၇ မှု၊ နာကျင်စေမှု ၁၇ မှု၊ ယာဉ်တိုက်မှု ၆၃ မှု၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူသတ်မှု
၁၁ မှု၊ မုဒိမ်းမှု နှစ်မှု၊ ခိုးမှု ၁၉ မှု၊ နာကျင်စေမှု ၂၈ မှု၊ယာဉ်တိုက်မှု ၂၆ မှု၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင်
လူသတ်မှု ၆ မှု၊ မုဒိမ်းမှု ၄ မှု၊ ခိုးမှု ၁၃ မှု၊နာကျင်စေမှု ၂၆ မှု၊ ယာဉ်တိုက်မှု ၂၉ မှု၊ နေပြည်တော်
တွင် လူသတ်မှု နှစ်မှု၊ မုဒိမ်းမှု ၄ မှု၊ ခိုးမှု ၂၁ မှု၊နာကျင်စေမှု ၁၁ မှု၊ ယာဉ်တိုက်မှု ၁၈ မှု၊ ကရင်ပြည်
နယ်တွင် လူသတ်မှု ၃ မှု၊ မုဒိမ်းမှု ၂ မှု၊ ခိုးမှု ၉ မှု၊ နာကျင်စေမှု ၅ မှု၊ ယာဉ်တိုက်မှု ၃၆ မှု၊ ရှမ်းပြည်
နယ်တွင် လူသတ်မှု ၇ မှု၊ မုဒိမ်းမှု ၁ မှု၊ ခိုးမှု ၂၁ မှု၊ နာကျင်စေမှု ၂၀ မှု၊ယာဉ်တိုက်မှု ၈၇ မှု၊ ကယား
ပြည်နယ်တွင် မုဒိမ်းမှု တစ်မှု၊ ခိုးမှု လေးမှု၊ နာကျင်စေမှု တစ်မှု၊ ယာဉ်တိုက်မှု ၈ မှု နှင့် ချင်းပြည်
နယ်တွင် နာကျင်စေမှု နှစ်မှု နှင့်ယာဉ်တိုက်မှု ငါးမှုတို့ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါစာရင်းများအရ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များ အနက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ
ကြီးတွင် မှုခင်းဖြစ်ပွားမှု မှာ ပထမအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီး မန္တလေး၊စစ်ကိုင်း၊ပဲခူး၊ စစ်ကိုင်း၊ မကွေး
တိုင်းနှင့်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် မှုခင်းဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမှာ ဒုတိယအများ ဆုံးဖြစ်
ပွားခဲ့ကာ ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် မှုခင်းဖြစ်ပွားမှုမှာ ၇ မှုမှ ၈၆ မှုအတွင်းသာရှိ
တိုးဝေအောင် - မြန်မာတိုင်း(မ်)
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲ ခန့်တွင် အောင်ဇေယျအိမ်ရာ
တိုက်(၃၅)တွင် အိမ်ရှင် ဒေါ်အေးအေးမြင့်နှင့် ညောင်တုန်းမှလာသော မောင်အောင်ဇံမြင့်၊
မင်းကိုကို၊ မလဲ့လဲ့ဝင်းတို့ ပြည်ပသို့သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ငွေကြေးကိစ္စ
စကားအချေအတင် ပြောဆိုနေကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် သက်သေများနှင့်အတူ သွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ရာ ဒေါ်အေးအေးမြင့်သည်
တရားဝင် မှတ်ပုံတင်လိုင်စင်မရှိဘဲ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် လူများကို
ပို့ဆောင်ပေးနေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့် အလုပ်အကိုင်ပြုလုပ်ရာတွင် တွေ့ရှိသည့်
စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ငွေလွှဲလက်မှတ်များကို သိမ်းဆည်းကာ အရေးယူပေးရန်
အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်းက(ပ)၁၂၂၅/၁၃ ပြည်ပအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ
၂၆ အရ အမှုဖွင့်ကာ အင်းစိန်မြို့နယ်တရားရုံးသို့ တရားစွဲဆို တင်ပို့ခဲ့မှု ဖြစ်ကြောင်း
မင်းသုနောင် - မြန်မာတိုင်း(မ်)
ဘားအံမြို့ ကရင်ပြည်နယ်နေ့ပွဲတော်မှာ ဆိုင်နေရာဈေးကြီးတဲ့အတွက် ရိုးရာအစားအသောက်ရောင်းတဲ့ဒေသခံတွေ ပွဲခင်းနား မကပ်နိုင်ကြပါဘူး၊ ပွဲခင်းပြင်ပမှာပဲ အဆင်ပြေသလို ရောင်းနေကြရပါတယ်။
ပွဲခင်းထဲမှာ နေရာယူနေတာကတော့ ခေတ်ပေါ်အစားအသောက်မျိုးစုံ ရောင်းချတဲ့သူတွေပါ။
ဒေသထွက်အစားအသောက်တွေလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရွာပြင်ကို ရောက်မှန်းမသိရောက်နေကြပြီ ထင်ပါရဲ့။
နောက်ဆိုရင်ဒီအစားအသောက်တွေကို လူတွေသိကြတော့မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ဘာအံသားတဦး ပြောပါတယ်။
ဒီစာ ဖတ်မိရင်တော့ ...လာမယ့်နှစ်တွေမှာ ရိုးရာ အစားအစာတွေကို နေရာပေးရေးဆိုတာကို တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများ စိတ်ကူးမိကြမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံများ - မန်းမျိုးမြင့်)
ညီညွတ်မှုနှင့် တရားမျှတသော ယှဉ်ပြိုင်မှု (Unity and Fair Competition)
ညီညွတ်မှု (Unity) မရှိသော နိုင်ငံ (သို့) အဖွဲ့အစည်းသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိနိုင်သလို၊ တရားမျှတသော ယှဉ်ပြိုင်မှု (Fair Competition) မရှိသော (ကင်းမဲ့သော)နိုင်ငံ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း သည်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိနိုင်ပေ။
ယနေ့ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများကို လေ့လာလျှင် ယင်းနိုင်ငံတို့သည် ညီညွတ်မှု သို့မဟုတ် တရားမျှတသော ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိကြသည် (အားကောင်းကြသည်)ကို လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ယင်းအချက် နှစ်ချက်လုံး မရှိသောနိုင်ငံ များမှာမူ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပြဿနာ သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းစစ်များဖြင့် ရင်ဆိုင် နေကြရသည် ဆိုသည်ကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ မြင်နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် ညီညွတ်မှု သို့မဟုတ် တရားမျှတသော ယှဉ်ပြိုင်မှု သို့မဟုတ် ယင်းအချက်နှစ်ခုရှိရန် လိုအပ်သနည်း ဆိုသည်နှင့် ယင်းတို့သည် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပြဿနာကို အဘယ်ကြောင့် ဖြစ်တည်စေသနည်း ဆိုသည့်အချက်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသည်။
အာဏာခွဲဝေမှု မညီမျှမှုနှင့် ဓနဥစ္စာ ခွဲဝေမှုမညီမျှမှုတို့မှ ဆက်စပ်ဆင့်ကဲ ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ရှိသော လူမှုရေးပဋိပက္ခများနှင့် စီးပွားရေး ပဋိပက္ခများမှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခများနှင့် စစ်ရေးပဋိပက္ခများ အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်း သွားတတ်လေ့ရှိသည် ဆိုသည်ကို တွေ့ရပေသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ သည်လည်း ညီညွတ်မှု (Unity) နှင့် တရားမျှတသော ယှဉ်ပြိုင်မှု (Fair Competition) ရှိရန် လိုအပ်ပေမည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေများကို စနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်လျှင် အဘက်ဘက်တွင် တိုးတက်မှုများ ရရှိလာမည်ဟု ထင်မြင်မိသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ အမိန့်ပေး စီမံကွပ်ကဲ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့သော်လည်း (တစ်နည်းအားဖြင့် စက်မှုထူထောင်ရေး မူဝါဒများ၊ လယ်ယာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မူဝါဒများ အစရှိသည်တို့ကို) မြန်မာနိုင်ငံသည် ယနေ့တိုင် ပြည်ပအမှီအခိုကို ရယူနေရဆဲ ဆင်းရဲသောနိုင်ငံ အဆင့်တွင်သာ ရှိနေသေးသည် ဆိုသည်က ယခင်က ကျင့်သုံးခဲ့သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုများနှင့် မူဝါဒများသည် အားနည်းချက်များ ရှိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် အဘက်ဘက်တွင် ချည့်နဲ့ယိမ်းယိုင်လာကာ အမျိုးသားလုံခြုံရေး (National Security) တွင်ပင် ထိခိုက်လာသည်ကို တွေ့ရပြီး “ဆန်ကောထဲ ထည့်လှိမ့်ခံရသော ဆီးဖြူးသီး” သဖွယ် ဖြစ်လာနေသည် ကိုလည်း သတိပြုမိသည်။
မိမိနိုင်ငံသားတို့ အကြားတွင် သပ်ရှိုသွေးခွဲခြင်း၊ မိမိတို့၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပြိုကွဲအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ မလိုလားအပ်သော ပြိုင်ဆိုင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ဖန်တီးခြင်းကို အခြေပြုပြီး မိမိ၏အကျိုးစီးပွားကို ဖန်တီးယူလာမှု များကိုလည်း တွေ့မြင်လာရသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ မြန်မာလူမျိုး များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ကို ကြိုတင်တွေးဆ မြင်ကြည့်နိုင်ရန် အတွက် နိုင်ငံရေးအမြင် ရှိရန် လိုအပ်လာပေသည်။ တစ်နည်းဆိုသော် “ဆန်ကောထဲ ထည့်လှိမ့်ခံရသော ဆီးဖြူသီး” ကဲ့သို့ မဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် တရားမျှတသော ပြိုင်ဆိုင်မှု (Fair Competition) မရှိသောကြောင့် ပြည်တွင်းပဋိပက္ခ များကို ကြုံတွေ့နေရ သည်။ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခများ ကြီးထွားလာ သောအခါ နောက်ဆုံးတွင် အမုန်းတရားများနှင့် သံသယများကို ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ဖြစ်တည်လာစေသည် ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
ယင်းသို့သော အခြေအနေသို့ ရောက်သွားလျှင် ရှုပ်ထွေးသော (ဖြေရှင်းရန် ခက်ခဲသော) အခြေအနေသို့ ကူးစက်သွားတတ်ပြီး တိုင်းပြည်သည် နောက်ဆုံးတွင် လွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခု၏ လက်ဝေခံသြဇာခံ နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်သို့ အလိုအလျောက် လုံးလုံးလျားလျား သက်ရောက်သွားခြင်းကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည် ဆိုသည်ကို သတိမူရပေမည်။
တရားမျှတသော ယှဉ်ပြိုင်မှု (Fair Competition) မရှိလျှင် ရေရှည် တည်ငြိမ်မှု (Longterm Stability) နှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (Longterm Development) တို့သည် (မလိုလားအပ်သော အင်အားတို့ ကို အသုံးပြုရသောကြောင့်) ခက်ခဲလေ့ရှိသည်။
မိမိနိုင်ငံထက် သာလွန်သွားသော နိုင်ငံများကို မရမက အမီလိုက်မည် ဟူသော မျိုးချစ်စိတ် သည်လည်း ညီညွတ်မှုနှင့် တရားမျှတသော ယှဉ်ပြိုင်မှု အပေါ်တွင် များစွာ အပြန်အလှန် မူတည်နေလေ့ရှိပါသည်။
ယနေ့ဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ညီညွတ်မှုနှင့် တရားမျှတသော ယှဉ်ပြိုင်မှု နှစ်ရပ်စလုံးကို ဘက်စုံထောင့်စုံမှ ဝိုင်းဝန်း တည်ဆောက်နေကြချိန်လည်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာတများ အပါအဝင် နိုင်ငံသားများ အပေါ် မတရား အမြတ်ထုတ်လိုသော ပြည်ပနိုင်ငံကြီး အချို့၏ ခြေလှမ်းများ (ခပ်စိပ်စိပ်) ကို အထူးသတိပြုပြီး ခဲတစ်လုံးဖြင့် ငှက်ပေါင်းများစွာ အပစ်ခံရသည့် အဖြစ်မျိုး မဖြစ်စေရန် ကြိုတင် ကာကွယ်ရပေလိမ့် မည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ အနာဂတ်ဘဝများနှင့် ဆန္ဒများကို ပြောင်းလဲပေးမည့် ရွေးကောက်ပွဲကြီး ဖြစ်လာပေနိုင်သည်။
မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ဖို. စီစဉ်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသား တရားရုံးတင် စစ်ဆေး
မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ဖို. စီစဉ်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသား တစ်ဦးကို အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး စွဲချက်တွေနဲ. ဂျကာတာမှာ ယနေ. တရားရုံးတင် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
စွဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ်မတွေအရ ပြစ်မှုကျုးလွန်ကြောင်း တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင် သူဟာ သေဒဏ် ကျခံရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
Saparino နဲ. အပေါင်းအပါ တစ်ဦး စီးနင်းလာတဲ့ မော်တော် ဆိုင်ကယ်ကို မေလ ၃ ရက်က ရဲတပ်ဖွဲ.က ရပ်တန်. စစ်ဆေးရာမှာ သူတို. လွယ်ထားတဲ့ ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ လက်လုပ်ဗုံးတွေ တွေ.ရှိရတယ်လို. သိရပါတယ်။ သူတို. ငှားရမ်း နေထိုင်တဲ့ အိမ်မှာလဲ ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းတွေ တွေ.ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရက်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ ဒီကိစ္စကို ကြိုးကိုင်သူ Sigit Indrajid နဲ. အခြား နှစ်ဦးကို ရဲက ထပ်မံ ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
သူနဲ. အတူ ဖမ်းဆီး ခံရသူ အခြား လေးဦးကိုလဲ နောက်ပိုင်းမှာ ရုံးတင် စစ်ဆေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စွပ်စွဲချက်တွေကိုတော့ သူတို. အားလုံးက အပြစ် မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုထားကြပါတယ်။
တရားလိုပြ ရှေ.နေက Saparino ဟာ ဂျကာတာ မြို.လယ်က ဗလီ ၀တ်ကျောင်း တစ်ခုမှာ အစွန်းရောက် ဘာသာရေး သမားတွေရဲ. ဟောပြောချက်တွေကို နှစ်လ ရှည်ကြာ နားထောင်ရင်းက အစွန်းရောက် ၀ါဒီ တစ်ဦး အဖြစ် သွပ်သွင်းခြင်း ခံခဲ့ရတယ်လို. တရားခွင်မှာ လျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဘာလီဗုံးခွဲမှုရဲ. လက်သည် Abu Bakar Bashir ရဲ. ဟောပြောချက်တွေကိုလဲ သွားရောက် နားထောင်လေ့ ရှိတယ်လို. သတင်း ရရှိပါတယ်။
သူတို.ရဲ. ဗုံးပြုလုပ်နည်း သင်ယူရာ နေရာက အင်တာနက်ဖြစ်ပြီး ဒီအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်သူတွေဟာ facebook ကတဆင့် ဆုံတွေ.ခဲ့ကြတာလို. သိရှိရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့နယ်၊ သစ်ရင်းပြွန်ချောင်း၊ င/ရုပ်ခင်း၊ ညောင်ချောင်း ရဲစခန်း မှ ဒုရဲအုပ်အဆင့် နှင့် အခြားအဆင့် ရဲဝန်ထမ်းများသည် သစ်ရင်း ပြွန်ချောင်း တွင် ခရီးသည် လှေ၊ သမ္မန်၊ ဘုတ် များကို တစ်စီးလျှင် ၅၀၀၀၀ ကျပ် မှ ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်ထိ အတင်း အဓမ္မ ဓါးပြတိုက်သလို သေနတ်ပြတောင်းစား နေပါ၍ ကုန်သည်၊ ခရီးသည်များ မလာဝံ့တော့ဘဲ နယ်မြေ ဒေသခံ ပြည်သူများမှာ အခက်အခဲ နှင့် ကြုံတွေနေရကြရပါသည်။
ဤသို့ လုပ်ဆောင်နေခြင်းသည် ပြည်သူလူထု ပေါ်သစ္စာမဲ့ ပြုကျင့်ရာ ရောက်နေပါသဖြင့် ၎င်းကဲ့သို့ ပြုလုပ်နေသူများကို ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးပါ ရန် ဒေသခံပြည်သူများ ကိုယ်စား တင်ပြ အပ်ပါသည်။
၄င်းအပြင် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်ထရံတွင်လည်း ခရီးသည် ကုန်သည်၊ လှေ၊ သမ္မန်၊ ဘုတ်တို့ ထံမှလည်း အထက်ပါအတိုင်း ရဲဝန်ထမ်းများက သွေးအေး ဓါးပြတိုက်လျှက် ရှိနေပါကြောင်း တိုင်ကြား အပ်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့တွင် အခြေစိုက် လှုပ်ရှားနေကြသည့် နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအို (၃) အဖွဲ့ ထွက်ခွာသွားကြပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပေါက်တောမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတက်ထွန်းအောင်က ပြောသည်။
ထွက်ခွာသွားကြသော နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုများမှာ မာတေဇာ၊ Save the children နှင့် နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း ဦးတက်ထွန်းအောင်က အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
“ သူတို့ရုံးတွေကို ပြန်အပ်ပြီး မနေ့ကတည်းက ထွက်သွားကြတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အပြီးအပိုင် ထွက်သွားကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆလို့ ရပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ထွက်ခွာသွားကြသည်မှာ ပေါက်တောမြို့ခံများက အန်ဂျီအိုများကို လက်မခံကြောင်း ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်သည့်အတွက် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပေါက်တောမြို့ခံ တစ်ဦးက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ ပေါက်တောမှာ မြို့သူ မြို့သားတွေက အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်နေ့ကတည်းက အန်ဂျီအိုတွေ ကို မြို့ပေါ်မှာ ရုံးစိုက်ပြီး လှုပ်ရှားတာကို လက်မခံတော့ဘူးလို့ စာထုတ်တယ်။ ပေါက်တောမှာရှိတဲ့ အန်ဂျီအို တွေ ၂ ရက်အတွင်း ထွက်သွားကြဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက် သူတို့ ထွက်သွားကြတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က ပေါက်တောမြို့ သာသနာ့ဗိမာန်တော်ကြီးတွင် ပေါက်တော မြို့သူ မြို့သားများက လူထုအစည်းအဝေးတရပ်ကျင်းပပြီး အချက် ၉ ချက်ပါ ကြေငြာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်များထဲတွင် ပေါက်တောမြို့နယ်အတွင်း ဒေသခံများမဟုတ်သော NGO- INGO များအတွက် အိမ်းငှားရမ်းမှုကို ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ ဒေသအတွင်း ဒေသခံများမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုများ (၂) ရက်အတွင်း ထွက်ခွာသွားကြရန် တောင်းဆိုကြောင်း၊ ယင်းပြင် လတ်တလော ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆင်တက်မော်ပြဿနာတွင် ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခံရသည့် ဌာနေ ရခိုင်လူနာများအား ICRC မှ ခွဲခြားပစ်ပယ် ဆက်ဆံမှုကို လုံးဝကန့်ကွက်ကြောင်း ဖေါ်ပြသည့် အချက်များ ပါဝင်သည်။
ကချင်ပြည်နယ် အခြေစိုက် ရှမ်းနီတိုင်းရင်းသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီဝင်များနှင့် အီးယူ သံအမတ်တို့ တွေ့ဆုံ
ရှမ်းနီ တိုင်းရင်းသားများ ဖွံ့ဖြိုတိုးတက်ရေး ပါတီဝင်များနှင့် အီးယူ သံအမတ်တို့ တွေ့ဆုံစဉ်
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ အခြေစိုက် ရှမ်းနီ တိုင်းရင်းသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ)သံအမတ် အဖွဲ့တို့ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်က မြစ်ကြီးနားမြို့ ခေမာသီရိ ရပ်ကွက်ရှိ ရှမ်းမျိုးနွယ်စုများ ဓမ္မာရုံတွင် တစ်နာရီကျော်ကြာ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ယင်းသို့ တွေ့ဆုံစဉ် ရှမ်းနီလူမျိုးများအား မှတ်ပုံတင်ဌာန၌ အမည်စာရင်းပေါက်အောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကူညီပေးရန် အီးယူ သံအမတ်အဖွဲ့အား ရှမ်းနီပါတီဝင်များက အကူအညီ တောင်းခံခဲ့သည်။
ရှမ်းနီ တိုင်းရင်းသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်လေးက "ရှမ်းနီတွေဟာ ကချင်ပြည်နယ်မှာ အများဆုံး နေကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် လူမျိုးတောင် ပျောက်ခါနီးပါပြီ။ လူမျိုးကိုလည်း နာမည်အမျိုးမျိုး ခေါ်ဝေါ်နေပြီး လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဌာနမှာတောင် အမည်မှန်မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုး၊ စကား၊ စာပေတွေဟာ ပျောက်ကွယ် လာပါတယ်။ အီးယူဘက်က တက်နိုင်သမျှ ကူညီဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်"ဟု ဆိုသည်။
ရှမ်းနီ တိုင်းရင်းသားများ၏ အကူအညီ တောင်းခံမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အီးယူ သံအမတ်ကြီး Mr.Roland Kobia က တတ်နိုင်သရွေ့ ကူညီသွားမည်ဟု ပြန်လည် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းနီ တိုင်းရင်းသားများသည် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် နေထိုင်ကြပြီး လက်ရှိတွင် ရှမ်းနီ တိုင်းရင်းသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမှ ရှမ်းနီလူဦးရေ စာရင်းကောက်ယူနေကာ ခန့်မှန်း လူဦးရေ သိန်း ၂၀ ၀န်းကျင် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်ကာလ ဟိုတယ် အခန်းငှားခ လေးဆ မြင့်တက်
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့တွင် နှစ်စဉ် ကျင်းပလေ့ရှိသော တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်ကာလ အတွင်း ဟိုတယ် အခန်းငှားခ ဈေးနှုန်းများ လေးဆအထိ မြင့်တက်သွားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (အင်းလေးဇုန်) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဌေးအောင်က ပြောကြားသည်။
တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော် ကာလတွင် လာရောက်မည့် ဧည့်သည်များ တည်းခိုနိုင်ရန် လွန်ခဲ့သော သုံးလခန့် ကတည်းက အခန်း ကြိုတင် မှာယူသော်လည်း ဟိုတယ်များဘက်က ကြိုတင် ငှားရမ်းခြင်း မပြုကြောင်း၊ အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးပတ်တွင် သွားရောက် ငှားရမ်း သောအခါ ပုံမှန် ကျပ် ငါးသောင်းတန် နှစ်ယောက်ခန်း ငှားရမ်းခမှာ ကျပ် နှစ်သိန်း ဝန်းကျင်အထိသို့ မြင့်တက် သွားကြောင်း၊ တစ်ရက် တည်းခိုမည့် သူများကို အခန်း ငှားရမ်းမှု မရှိကြောင်းနှင့် အနည်းဆုံး သုံးလေးရက် တည်းခိုမည့် သူများကိုသာ အခန်းငှားရမ်းမှု ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ကာလအတွင်း ဟိုတယ်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်မှုမှာ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ဖြစ်လေ့ရှိပြီး ကျပ် ငါးသောင်းတန် အခန်းငှားခမှာ ကျပ် ခုနစ်သောင်းနှင့် ကျပ် ရှစ်သောင်းခန့် အထိသာ မြင့်တက်လေ့ ရှိသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ လေးဆ အထိ မမြင့်တက်ခဲ့ဖူးကြောင်း ရန်ကုန်မြို့မှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ဆိုသည်။
နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများသည် ပုံမှန်အချိန်များတွင် တောင်ကြီးမြို့တွင် ညအိပ် တည်းခိုလေ့ မရှိဘဲ ညောင်ရွှေနှင့် အင်းလေးတွင်သာ ညအိပ် တည်းခိုလေ့ ရှိသောကြောင့် တောင်ကြီးမြို့တွင် ဟိုတယ် များများစားစား မရှိခြင်းက ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား မမျှတသော အခြေအနေများကို ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကားပြော ဧည့်လမ်းညွှန် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးညီညီက ဆိုသည်။
ပုံမှန် အချိန်များတွင် နှစ်ယောက်ခန်း တစ်ခန်းလျှင် ငှားရမ်းခအဖြစ် တစ်သောင်း သုံးထောင်ကျပ် ယူသော်လည်း တန်ဆောင်တိုင် ကာလအတွင်း ဧည့်သည် အဝင်များပြီး အခန်းရရှိမှု နည်းပါးသောကြောင့် ကျပ် လေးသောင်းခန့် ယူကြောင်းနှင့် ကျန် အချိန်များတွင် ပုံမှန်ဈေးအတိုင်း ငှားရမ်းခ ယူကြောင်း တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိ အလတ်စား ဟိုတယ်တစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးနှင့် အင်းလေး ဒေသတို့တွင် စုစုပေါင်း ဟိုတယ် ၆၇ လုံးနှင့် အခန်းပေါင်း ၁၈၃၇ ခန်း အထိ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းကျေးရွာများ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဆို
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကျေးရွာများ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး အတွက် စီမံချက်များ ချမှတ်ကာ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစောမြသိန်းက ပြောကြားသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့က ပုသိမ်မြို့ရှိ တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ရုံးတွင် ပြုလုပ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ တိုးမြှင့် ကောက်ခံခြင်း တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲ၌ ၄င်းက အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ကျေးရွာ ၈၃၀ ခန့်မှာ လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာများ လျှပ်စစ်မီး ဆက်လက်ရရှိရေး အတွက် အိမ်ခြေ ၁၀၀ မှ ၁၅၀ အထိရှိသော ရွာများကို ပထမဦးစားပေး၊ အိမ်ခြေ ၂၀၀ မှ ၂၅၀ အထိရှိသောရွာများကို ဒုတိယ ဦးစားပေး၊ အိမ်ခြေ ၂၅၀ အထက်ရှိသောရွာ များကို တတိယဦးစားပေး အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန တို့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကာ ကျေးရွာများက ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆောင်ရွက်လိုလျှင်လည်း ကူညီပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးစောမြသိန်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာ မဟာဓာတ်အားလိုင်း တောင်ဘက်စွန်း၌ တည်ရှိ သည့်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ လျော့နည်း ကျဆင်းနေသောကြောင့် ကန်ကြီးထောင့် မြို့နယ် ခုံစင်ကုန်းကျေးရွာ နှင့် ကျိုက်လတ်မြို့ တို့တွင် ၂၃၀ ကေဗီအေ ဓာတ်အားခွဲရုံများ တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေး လုပ်ငန်းမှ အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးအောင်မြင့်က ပြောဆိုသည်။
“ငပုတောမြို့နဲ့ ကပ်လျက်ရှိတဲ့ စဥ့်အိုးဖိုရွာ၊ ဥယျာဉ်ကုန်း ရွာတွေမှာ အခုအထိ မီးမလင်းသေးပါဘူး။ မြို့ပေါ်မှာ ထရန်စဖော်မာ လေးလုံးရှိတဲ့အတွက် အဲဒီရွာတွေကို မီးပေးဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဓာတ်တိုင်ကိစ္စ ပြဿနာ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဌာနက ဓာတ်တိုင်တွေကို သူတို့ဆီက ဝယ်ရင်ဝယ်၊ မဝယ်ရင် ဌာနကချပေးတဲ့ အချိန်ကျမှ တပ်ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တစ်တိုင်းလုံးက ကျေးရွာတွေ မီးလင်းဖို့ ကတော့ အလှမ်းဝေးနေဦးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ငပုတောမြို့နယ်မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးကြည်က ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်မီး သုံးစွဲနိုင်သူမှာ ၂၆ သိန်းကျော်သာ ရှိပြီး အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံတွင် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားတို့မှာ အောက်ဆုံးအဆင့် တွင်သာ ရှိနေကြောင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန၏ မှတ်တမ်း များအရ သိရသည်။
မော်လမြိုင်မြို့လယ်တနေရာက လမ်းဘေးဆိုင်းဘုတ်ကြီးမှာ ရေးထားတာက ... စင်ကာပူမှာ ကျောင်းတက်ပါ တဲ့။
study abroad information centre ဆိုတာကတော့ ပြည်ပထွက် ကျောင်းတက်လိုသူများ စုံစမ်းမေးမြန်းသင့်တဲ့ဌာန ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ၂,ဝဝဝ လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒီနှစ်ထောင်က ဘာအတွက်လဲ၊ ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက်လား၊ စုံစမ်းကြည့်လိုတယ် ဆိုရင်တော့ ကြော်ငြာမှာ တွေ့ရတဲ့ study abroad information centre ကို ဆက်သွယ်ရင် အသေးစိတ် သိရဖွယ်ရှိပါတယ်။
ကြော်ငြာမှာ တွေ့ရတဲ့ နံပါတ်တွေကို ခေါ်ကြည့်တော့ အဲဒီ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုဌာနရဲ့ ရန်ကုန်ရုံးနံပါတ်များ ဖြစ်တယ်လို့ သဘောပေါက်ရပါတယ်။
တိုးတက်လာမယ့် အနာဂတ်အတွက် သင် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား လို့ ကြော်ငြာမှာ မေးခွန်းထုတ်ထားတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အာရှရဲ့ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်များထဲမှာ စင်္ကာပူကတက္ကသိုလ်များလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ပညာရေးမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ စင်္ကာပူက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကို ဒီကဏ္ဍမှာ ခြေတလှမ်းမက ရှေ့က ဦးဆောင်နေတာပါ။
စလုံးမှာ မြန်မာပြည်သား အများအပြား ရောက်ရှိ ပညာသင်နေကြပါတယ်။
ပညာရေးအစီအစဉ်အပြီး ပြည်တော်ပြန်သူများရှိသလို ပြည်ပမှာပဲ ဆက်လက် နေထိုင် လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိပါတယ်။
မော်လမြိုင်မှာ အထက်က ပုံအတိုင်း ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကြီးနဲ့ ကြော်ငြာသလိုမျိုး မြန်မာပြည်က တခြားမြို့တွေမှာလည်း ကြော်ငြာနေမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ရန်ကုန်က မြေနီကုန်းလမ်းဆုံကနေ ကြည့်ရင် ဒဂုံစင်တာမှာ ဒီကြော်ငြာကိုပဲ ခပ်ကြီးကြီး တွေ့ရမှာပါ။
ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုဟာ ဒီဘက်ခေတ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတခု ဖြစ်လာနေပြီ ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
ငွေကြေးတတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်ပတက္ကသိုလ်တွေမှာ တက်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ မြန်မာလူငယ်များ ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး မျက်စိပွင့် နားပွင့်ပါလိမ့်မယ်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင်ထဲမှာ အစိုးရတပ် ရဲဘော် ၁ ဦးက သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက် အရပ်သား ၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီပစ်ခတ်မှုဟာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ၁၀၅ မိုင်နယ်စပ် ကုန်သွယ်စခန်းကနေ မူဆယ်ကိုသွားတဲ့ လမ်းမကြီးပေါ်က နမ့်ခုမ် ၀မ့်မိုင် ရွာအနီးမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။
နိုဝင်ဘာ ၆ ရက် မနက် ၁ နာရီ ၀န်းကျင်အချိန်မှာ အစိုးရစစ်ကြောင်းက မတ်တူးဆလွန်းကားတစီးကို ၀င်တိုက်ရာက ပစ်ခတ်သေဆုံးမှု ဖြစ်ခဲ့တာလို့ မူဆယ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးက ဦးစီးအရာရှိ ဦးဇော်မင်းက ပြောပါတယ်။
“စစ်ကြောင်းထွက်တဲ့ ကားကို ၀င်တိုက်မိရာကနေစပြီး ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာပါ။ ကျော်ဝေထက် မောင်းတဲ့ကားက အဲဒီစစ်ကြောင်းသွားနေတဲ့ ကားကို ၀င်တိုက်မိတဲ့ အခါကြတော့ စစ်ကြောင်းသွားနေတဲ့ ကားက တယောက်က ဒဏ်ရာရသွားတာပေါ့။ အဲဒီလို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုကြောင့် စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့ ရဲဘော်တယောက်ကနေပြီး ၀င်တိုက်တဲ့ ကားမောင်းသူ ကျော်ဝေထက်ကို ပစ်ခတ်တဲ့အတွက် ဆေးရုံရောက်ပြီး ဆုံးသွားတယ်လို့ ကြားပါတယ်။”
ဒီပစ်ခတ်မှုမှာ သေဆုံးသွားတဲ့ ယာဉ်မောင်း ကိုကျော်ဝေထက်ကို မဆင်မခြင် ယာဉ်မောင်းနှင်မှုနဲ့ အမှုဖွင့်ထားသလို သူ့ကိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရတပ်သားကိုလည်း ပုဒ်မ ၃၀၂/ ၃၀၇ နဲ့ အမှုဖွင့်ပြီး လိုအပ်သလို အရေးယူဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ဦးဇော်မင်းက ဒီဗွီဘီကို ပြောသွားပါတယ်။
အစိုးရ ယာဉ်ထဲမှာ ဒုအကောက်ခွန်မှူးနဲ့ အရပ်သားတွေ၊ တပ်မတော်သားတွေလည်း ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မူဆယ်ရဲစခန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာတော့ တာဝန်ကျ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ကျော်ထွန်းက ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။